Apple inobvisa iyo watchOS 5.1 yekuvandudza | Ndinobva mac
Dambudziko idzva mune iyi vhezheni yewatchOS maawa mashanu mushure mekumisikidzwa kwayo inoita kuti kambani itore iyo vhezheni itsva. Zvinotaridza kuti panguva ino dambudziko rine chekuita nekutangazve kweApple Watch Series 5.1 mushure mekuvandudza, uye ndizvozvo haikwanise kubhowa neiyo nyowani vhezheni yakaiswa kubatirira paapuro.
Parizvino, chiyero chekutanga chakatorwa nekambani yeCupertino ndechekubvisa iyo vhezheni itsva kusvikira dambudziko ragadziriswa. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti uku kukundikana kunokanganisa chete azvino zvigadzirwa, ese maApple Watch Series 4 mamodheru (kunze kwekunge zvazivikanwa) uye hazvibate munhu wese.
Mune ino kesi ini ndinogona kutaura kuti yangu Apple Watch Series 4 yakagadziridzwa kubva nezuro uye haina dambudziko, inoshanda zvakakwana. Ichi hachisi chinhu chinogona kutaurwa nemunhu wese uye ndechekuti yekutanga kugadzirisa yakatora kushamisika kwakashata kwezuva. Kana maitiro acho achinge aitwa zvinoita sekunge mawatch vanochengeta apuro rakagwamba nechando uye hapana nzira yekuvabuditsa imomo.
Apple iri kushanda kubva paminiti zero yekubviswa kweshanduro nyowani kugadzirisa dambudziko uye isu tinogutsikana kuti mumaawa mashoma anotevera ivo vachatanga iyo nyowani vhezheni. Zvichiri kuitika, avo vanotova newatchOS 5.1 vhezheni yakaiswa uye inoshanda, zvakanaka, yakakwana, uye avo vane dambudziko mumawachi avo ipapo Havana imwe sarudzo kunze kwekumirira kuti igadziriswe ine vhezheni itsva iyo ichaburitswa munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inodhonza watchOS 5.1 kugadzirisa
Hauna kuona here zuro rakakosha? Heino pfupiso yemaminetsi mapfumbamwe
Aya ndiwo maitiro eiyo T2 chip iripo pakati pevamwe muMac nyowani